एमालेको महाधिवेशन २ दिन लम्बिँदा खर्च कति ? - ramechhapkhabar.com
एमालेको महाधिवेशन २ दिन लम्बिँदा खर्च कति ?
नेकपा एमालेको महाधिवेशन दुई दिन लम्बिँदा करिब डेढ करोड रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ । एमालेको महाधिवेशन मङ्सिर १० देखि १२ गतेसम्म तय भए पनि तोकिएको समयमा नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सम्पन्न हुन नसकेपछि दुई दिन लम्बिन पुगेको थियो ।
१२ गते एक दिन सहमतिको प्रयास गरिँदा निर्वाचन कार्यक्रम र बन्द सत्र प्रभावित भएको थियो भने त्यसपछि निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढाउँदा आज सम्म लाग्न पुगेको हो ।
एमाले पार्टी कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले दुई दिन महाधिवेशन लम्बिँदा करिब १ करोड ५० लाख बढी खर्च भएको बताए । यद्यपि यसको यकिन विवरण पछि प्राप्त हुने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार हालसम्म महाधिवेशनमा करिब ९ करोड खर्च भएको छ । एमालेको महाधिवेशन आज नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सक्ने तयारी छ । एमालेको महाधिवेशनको उद्घाटन चितवनस्थित नारायणी नदी किनार र बन्दसत्र सौराहामा भएको हो । महाधिवेशनमा एमालेका २१५३ प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
उम्मेदवार नै नदिएको पद म सपथ लिन्न : भीम रावल
नेकपा एमालेको अध्यक्षका प्रत्यासी भीम रावलले केन्द्रीय सदस्यमा नरहने प्रष्ट्याएका छन्। निर्वाचन सकिएपछि पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै रावलले अब छिट्टै नै मत परिणाम घोषणा हुने पनि बताए।
‘परिणाम छिट्टै हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु,’ रावलले भने। उनले निर्वाचन आयोगसँग आफूले अध्यक्ष बाहेक कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी नदिएको प्रष्ट्याएको बताए। ‘भित्र गएर हेर्दा मेरो अर्को ठाउँमा पनि उम्मेदवारी रहेछ। मैले हाम्रो निर्वाचन आयोगसँग अध्यक्षको उम्मेदवार हुँ। त्यसबाहेक अरुमा मेरो कुनैमा हुँदैन भनेँ,’ रावलले भने, ‘जुनमा उम्मेदवारी दिएकै छैन त्यसमा कसरी मैले सपथ लिनु?’
उनले आठौं महाधिवेशनमा पनि यस्तैखाले विवाद भएको स्मरणसमेत गरे। ‘आठौंमा पनि यही विवाद भएको थियो,’ उनले भने, ‘उम्मेदवार नै नभएको पदमा सपथलाई लिएर साथीहरुले विवादको विषय बनाउने छन्।’ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अडान राखेका कारण तोकिएको समयभन्दा लम्बियो एमाले महाधिवेशन। सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने ओलीको चाहनालाई ब्रेक लगाएका रावलकै कारण अधिवेशन लम्बिएको मात्र होइन, ओलीको लगातारको प्रयास पनि असफल बनेको थियो। त्यसैले आज बिहानमात्र निर्वाचन हुन सक्यो।
तपाईंको कति भोट पाउनुभयो होला त?
भीम रावललाइ पत्रकारको प्रश्न सोधेका थिए। त्यसमा उनले प्रष्ट जवाफ दिए, ‘मैले त्यसबारे अनुसन्धान गरेको छैन।’ उनको उम्मेदवारी जितका लागि भन्दा पनि ओलीको शैली विरुद्ध सांकेतिक थियो। ‘प्रतिनिधिले मत दिएनन् भने त कमिटी बाहिर बस्नु मेरो लागि सामान्य हो,’ रावलले भने, ‘मैले सदस्यमा उम्मेद्वारी दिएको थिइन। त्यसमा बस्ने कुरै भएन।’
ओली पक्षीय नेता कार्यकर्ताले भोट कसकसलाई नहाल्ने भन्दै बिहान पर्चा नै जारी गरेका थिए जसमा रावल, घनश्याम भुषालसहितका नेताहरुको नाम थियो। त्यसैलाई लिएर रावलले कडा प्रतिवाद गरेका थिए। ‘पर्चा बाड्दा तपाईँलाई चिसो लाग्यो होला?’ पत्रकारहरुले रावललाई सोधे। उनले जवाफ फर्काए, ‘मलाई चिसो तातो केही लागेको छैन।’